Jamaahiirta Man United Oo Magacaabay Ciyaartoy Musiibo Ahaa Oo U Ciyaartay Kulankii Xalay Ee Arsenal – Cadalool.com
Jamaahiirta Man United Oo Magacaabay Ciyaartoy Musiibo Ahaa Oo U Ciyaartay Kulankii Xalay Ee Arsenal
Taageereyaasha kooxda kubadda cagta Manchesster United ayaa magacaabay ciyaartoy musiibo ku ahaa bandhiggooda kulankii xalay ay barbar dhaca kula galeen Arsenal.
Man United oo garoonkeeda joogtay ayaa 2-2 kula dhamaysatay Arsenal oo marti u ahayd, waxaana ay ku sigatay in laga qaato saddexda dhibcoodba markii daqiiqaddii 88aad laga dhaliyey gool uu garsooraha ciyaartu diiday.
Intii ay ciyaartu socotay qaar ka mid ah ciyaaryahannada Manchester United ayaa sameeyey khaladaad sida Ander Herrera, laakiin waxa lama filaan noqotay in David de Gea oo xili ciyaareedkii tegay ahaa shaqsigii dhibcaha ugu badan u badbaadiyey uu sameeyey khaladaad dhimasho ah oo guul-darro qadhaadh u horseedi gaadhay kooxdiisa.
Goolhayahan reer Spain ayaa daqiiqaddii 88aad sameeyey wax lagu tilmaamay musiibo laakiin garsooruhu ka badbaadiyey markii uu si khalad ah ku diiday gool Arsenal dhalisay, waxaase wehelinayey khaladaad kale oo intii ciyaartu socotay uu sameeyey.
Kulankan waxa uu u ahaa mid aad uga duwan ciyaartii xili ciyaareedkii hore Manchester United iyo Arsenal iskaga hor yimaaddeen oo De Gea ninka garoonka ugu fiican loo doortay markii uu badbaadiyey goolal faro badan oo Gunners ay guusha ku heli lahayd.
Sidaas oo kale, dhamaan kulamadii horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkii hore waxa ka dhashay 28 gool oo kaliya, laakiin xili ciyaareedkan oo 15 ciyaarood oo kaliya ay kooxuhu yeesheen, waxa shabaqiisa taabtay 25 gool, taas oo saddex kaliya ka yar dhamaan goolashiisa sannadkii hore.
Haddaba markii ay ciyaartu dhamaatay waxa baraha bulshada si weyn loogu jarjaray De Gea iyo bandhig ciyaareedkiisa liitay, waxaana ay isku raaceen jamaahiirtu inuu ahaa musiibo xidhan funaanaddooda oo halis geliyey.
Si kastaba ha ahaatee, waxqabadka goolhaye David de Gea ayaa marar badan ay Manchester United ku heshaa dhibco muhiim ah.